Nhau dzekuMadokero dzakashanduka kuita mafirimu akakurumbira | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Nhoroondo yezvinyorwa, Mabhuku, Novela
Icho chinyorwa kana cinematographic genre yeiyo Oeste dzimwe nguva yakafungidzirwa zvisirizvo se menor. Asi hazvisi. Zvichida zvakare mberi, nemaEuropean ekuverenga mwero, iyo epics huru o nyaya dzinozvininipisa (chaiyo kana yekunyepedzera) yeNorth America West. Asi isu tese tichabvuma wakamboona kana kuverenga chero. Kubva kune idzo dze Marcial Lafuente Estefania, yakasarudzika yematafura ese emubhedha emadzisekuru edu nasekuru nevabereki uye anokodzera chitsauko chakaparadzana, kunyangwe idzo dze mazita makuru yenharaunda, senge Alan Le May o Elmore leonard, mushanduro yayo yemuganhu. Ichi chi kudzokorora kwemamwe emazita anonyanya kurangarirwa uye ndiani zvakare aiziva zvakawanda nezve budiriro nekuda kwekuchinja kwavo kwemafirimu.
1 Akaenda Nemhepo - Margaret Mitchell
2 Kukosha kwemutemo - Charles Portis
3 Desert Centaurs - Alan Le Chivabvu
4 Murume Anonzi Bhiza - Dorothy M. Johnson
5 Chitima che3: 10 ichienda kuYuma - Elmore Leonard
kuenda nemhepo - Margaret Mitchell
Imwe yekutengesa zvakanyanya munhoroondo uye imwe yeanonyanya kuzivikanwa. Margaret Mitchell akazviburitsa mu 1936 uye kugadzirisa kwayo ku guru screen yakanga iri 1939, ine budiriro yakatokura iyo yakaita kuti ive yechinyakare munhoroondo yemufirimu. Inotungamirwa na Victor Fleming, George Cukor naSam Wood, vakaita nyeredzi mariri Vivien Leigh, Clark Gable, Olivia de Havilland kana Leslie Howard, pakati pevamwe. Uye nhasi hazvibviri kufungidzira neimwe nzira, kana pasina zviso zvavo, izvi epic nyaya yakagadzirirwa muNorth American Civil War, iyo kunyangwe isina kuumbwa muWest, inogona kuverengerwa mumhando iyi panguva iyoyo.
Kukosha kwemutemo - Charles Portis
Ndiyo novel chinonyanya kuzivikanwa zvemunyori uyu, uyo akashaya muna Kukadzi wegore rino. Nyaya ye Mattie ross, mukadzi wechidiki anoda bata mhondi yababa vake nerubatsiro rwe veteran mumiriri yehurumende, chidhakwa uye rimwe ziso, akaendeswa kumamovie kaviri. Yokutanga ye Henry hathaway muna 1969, uye nyeredzi mairi John Wayne, iyo quintessential icon yeiyo Western genre. Uye muna 2010 iyo coen hama yakagadzirisa nyowani ne Jeff Mabhiriji yep protagonist.
Makore emarenje - Alan Le Chivabvu
Chivabvu aive munyori akasimba wemabhuku eWestern aine mashoma 15 enganonyorwa uye makumi mashanu nyaya refu, pamwe nezvinyorwa zvemufirimu. Makore emarenje yakabudiswa muna 1954, yatove pamagumo ebasa rake. Inotariswa se hunyanzvi, yakawanda cruder, yakareba uye yakakomba kupfuura yake vhezheni ye cinema, makore maviri gare gare, iyo yakajairwa director director John akayambuka, uye kuti iriwo zita rakakosha remhando. Ivo nyeredzi mariri John Wayne, Jeffrey Hunter naNatalie Wood, uyo anotamba Amosi (Ethan mufirimu) naMartin, vagari vaviri vanoita kutsvaga kwenguva refu ku kununura vamwe vasikana kubiwa nebato revaComanche maIndia.
Mumwe murume anonzi bhiza - Dorothy M. Johnson
Johnson, munyori weAmerica, inyanzvi mumhando iyi, kwaanowanzo garisana nehukama hunogara huchipesana pakati pevaIndia nevachena munzvimbo dzemuganhu dzeaya makore. Nemitsara mipfupi uye isina kujeka, inoshamisa uye dzimwe nguva yakaoma maitiro, Johnson anoziva kuratidza chokwadi. Ane chikwereti chake mamwe mazita akazove akabudirira mafirimu senge Iye murume akauraya Liberty Valance, kumwe kubatana kusingakanganwiki pakati John Ford naJohn Wayne; izvo Mumwe murume anonzi bhiza, ndiani akatungamira Elliot silverstein muna 1970, na Richard Harris we protagonist; Y Muti wakarembera, ndiani akadaro Delmer daves muna 1959 uye nyeredzi Gary Cooper, Maria schell naKarl Malden.
Chitima che3: 10 ichienda kuYuma - Elmore Leonard
Leonard inozivikanwa zviri nani semunyori we nyaya uye nyaya yematsotsi, asi zvakabatawo mhando dzekuMadokero. Iri zita rinotaura nyaya yenjodzi dzinounzwa kumutevedzeri wasabhuku Paul scallen (motokari Heflin) pachinangwa chake chekufambisa njodzi mutadzi Jim mwana (Glenn ford) kubva kuFort Huachuca kuenda kuguta re Kukakavara, kwaunofanirwa kutora chitima kuenda ku yuma jeri. En 2007 paive neshanduro nyowani, yaitungamirirwa na James mangold. Nezwi razvino uye shanduko yemazita evatambi, ivo nyeredzi mairi Russell Crowe naChristian Bale mune basa remuridzi uye murombo anozvininipisa uye akapererwa akatendeuka mutevedzeri wasabhuku.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » marudzi » Novela » Nhau dzekuMadokero dzakashanduka kuita mafirimu akakurumbira